Olu Na Brooch
Olu Na Brooch A kpaliri atụmatụ ahụ site na ọgụgụ isi Neoplatonic nke macrocosm na microcosm, na-ahụ otu usoro emepụtaghachiri na ọkwa niile nke cosmos. N'ịkọwapụta usoro ọla edo na usoro nke fibonacci, olu olu nwere atụmatụ mgbakọ na mwepụ na-agbaso usoro phyllotaxis nke a hụrụ na okike, dịka a hụrụ na ifuru osisi, ifuru, na osisi ndị ọzọ. Mkpịsị ụkwụ ọla edo na-anọchi anya Eluigwe na Ala, nke kpuchiere ya na mbara nke oghere. "Abụ M Hydrogen" n'otu oge na-anọchi anya ihe atụ nke "Ihe Nlekọta Kacha Elu na Universal" na ihe atụ nke Eluigwe na Ala n'onwe ya.
Jewelery Nke Achoro Achoro
Tiuzdee 25 Jenụwarị 2022
Jewelery Nke Achoro Achoro Ihe ịchọ mma mara mma, doo anya, ejirila rụọ ọrụ, nke emere site na mkpa ọ dị iji ihe mkpofu site na mmepụta nke Claire de Lune Chandelier. Usoro a aghọrọbala n'ọtụtụ nnakọta - na - akọ akụkọ niile, na - anọchite anya ihe dị iche iche nke onwe onye na nkà ihe ọmụma nke onye okike. Ngosiputa bu ihe di nkpa nke ndi n’ere ihe ndia nwere ihe ngosiputa, nke a gosiputara n’onwe ya site n’ozi achoro acrylic. Ewezuga eji enyo gosipụtara enyo, nke ya n’onwe ya na-egosipụta ìhè, ihe ahụ na-edo anya, na agba ma ọ bụ doo anya. Nkwakọdo CD na-eme ka echiche nke mgbapụta sikwuo ike.
Mgbanaka Nkume ima-nma nke Fantastic - pyrope - ihe omuma ya na-eweta ebube na nkwanye ugwu. Nke ahụ bụ ịma mma na ịdị iche nke nkume ahụ kọwara onyinyo ahụ, nke a na-achọ mma n'ọdịnihu. Ọ dị mkpa ịmepụta oghere pụrụ iche maka nkume, nke ga-eburu ya na ikuku. A dọpụrụ nkume ahụ karịa ihe aka ya. Nke a usoro inwe mmụọ agụụ mmekọahụ na ike ike. Ọ dị mkpa idobe echiche oge gboo, na-akwado echiche ọhụụ nke ọla.
Mbọsị Ụka 23 Jenụwarị 2022
Brooch Njirimara nke ọla a bụ nke ejiri nnukwu okwute wuo ebe a atọrọ ka okirikiri (ikuku). Ọdịmma nke ịchọ mma na-emepe naanị okwute na-ezo teknụzụ mgbakọ. Nkume ahụ n'onwe ya nwere ihe abụọ, na-emeghị ihe eji eme ya na obere ọyị na-ejigide ya. Efere a bụ ntọala nke ụzọ akwụkwọ nkwado niile. Ọ na - ejide ya na nkume nke abụọ. Ihe mejuputara ihe nile meziri ka okwesiri site na nnukwu okwute.
Satọdee 22 Jenụwarị 2022
Fraịdee 21 Jenụwarị 2022
Ọla Agbanyeghị na narị afọ nke 21, iji teknụzụ ndị dị elu nke oge a, nke ihe ọhụụ ma ọ bụ nke ọhụụ dị ukwuu, na-abụkarị ime ihe ọhụụ, ike ndọda na-egosi ihe dị iche. Ike ndọda bụ nchịkọta nke ọla nke eji emegharị emegharị na-eji naanị eri, usoro ochie, na ike ndọda, ihe a na-akọwaghị. Ihe mejupụtara ya bụ ọtụtụ ọla ọcha ma ọ bụ ihe ọla edo, nwere atụmatụ dị iche iche. Nke ọ bụla n’ime ha nwere ike jikọtara ya na paịlị ma ọ bụ okwute na pendant. Nchịkọta ahụ na-akpọpụta aha mmụọ dị iche iche.
Olu Na Brooch Jewelery Nke Achoro Achoro Mgbanaka Brooch Mgbanaka Ọla